सबै माग पूरा हुने चरणमा, सत्याग्रह तोडन डा.केसीलाई सरकारको आग्रह ! « MNTVONLINE.COM
सरकारले चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राख्दै अनशनमा बसेका डा. गोविन्द केसीका अधिकांश माग पूरा हुने चरणमा रहेको भन्दै सत्याग्रह तोड्न आग्रह गरेको छ ।
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता एवं परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले सत्याग्रहमा बसेका डा. केसीले राखेका चिकित्सा शिक्षा सुधारको सबै माग पूरा हुने चरणमा रहेकोले सत्याग्रह तोडन आग्रह गरेका हुन् ।
डा. केसी चिकित्सा क्षेत्रको माग गर्दै केही दिनदेखि जुम्लाबाट सत्याग्रह सुरु गर्दै अहिले काठमाडौंको त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा छन् । मन्त्री ज्ञवालीले डा. केसीले उठाएका मागहरु पूरा भएर कार्यान्वयनमा गइसकेकाले सत्याग्रह बस्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताए ।
डा. केसीको माग अनुसार चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी ऐन बनाई त्यसको आधारमा उच्चस्तरीय आयोग निर्माण गरिसकेको पनि उनले बताए ।